हाेसियार बिष बन्न सक्छ यी खानेकुरा दूध सँग खाएमा - ज्ञानविज्ञान
हाेसियार बिष बन्न सक्छ यी खानेकुरा दूध सँग खाएमा
खानेकुरा कहिले खाने के सँग खाने के सँग नखाने यस्ता कुराहरु पनि बुझ्नु जरुरी छ । अन्यथा खानाबाट अमृतको साटो बिष खाकाे बराबर हुन्छ ।
खानाको सोखिन मान्छेहरुलाई कुन खानेकुरासँग कुन खानेकुरा मिसाएर वा सँगै खानुहुँदैन भन्ने जानकारी हुँदैन । यसले गर्दा कहिलेकाँही कुनै दुई खानेकुरा सँगै खाँदा मानिस गम्भीर बिरामी पनि हुनसक्छन् ।
किनकी हरेक खाद्यान्नको कम्बिनेशन राम्रो नहुनसक्छ । यहाँ केही त्यस्ता खानेकुराको बारेमा उल्लेख गरिनेछ, जसलाई सँगसँगै खानुहुँदैन ।
१.चिकेनसँगै जुस वा मिठाई खानु हुँदैन, किनकी यसले पेटसम्बन्धी बिरामी निम्त्याउन सक्छ ।
२.फलफूलसँगै कहिले पनि स्टार्चयुक्त खानेकुरा खानुहुँदैन किनकी फलफूल छिट्टै पचाउन सकिन्छ, तर स्टार्चयुक्त खानेकुरा जस्तै भात वा आलुलाई पचाउन समय लाग्दछ । यसकारण यी दुवैलाई सँगै खानुहुँदैन ।
३.दूधसँगै कहिले पनि कागती वा अमिलो सुन्तला खानुहुँदैन । यदि सँगै खाइयो भने यसले एसिडिटी (ग्यास्ट्रिक) बढाउन सक्छ ।
४.चिसो पेयपदार्थ पिउनासाथ पुदीना सेवन गर्नु हुँदैन ।
धेरै समय दूध उमाल्ने बानि छ ? यस्ता साइड इफेक्ट हुनसक्छन्
गाईभैंसीको दूध हामी पोषणका लागि सेवन गर्छौं । गाईबस्तु पाल्नुको प्रयोजन नै त्यसको दूध हो । दुधलाई शुद्ध र उत्तम पेय पनि मानिन्छ ।
अक्सर हामी दूध उमालेर सेवन गर्छौं । दूध उमाल्दा त्यसमा रहेको सुक्ष्म जीवाणु नष्ट हुने गर्छ । तर, दूधलाई बारम्बार उमाल्नु स्वास्थ्यका लागि भने हानिकारक हुनसक्छ । दूधमा शरीरका लागि आवश्यक पोषण तत्व पाइन्छ ।
दूधमा क्यालिसयम, बोसो, प्रोटिन, फास्फोरस, विटामिन बी १२ , भिटामिन ए तथा राइबोˆलेविन जस्ता कयौ स्वास्थ्यवर्द्धक तत्व दूधबाट पाइन्छ । जसले दाँत तथा हड्डीलाई मजबुती प्रदान गर्नुका साथै शरीरलाई उर्जा प्रदान गर्छ । बारम्बार दूध उमाल्नाले यी पौष्टिक तत्व नष्ट हुने गर्छ ।
समस्या के छ भने अहिले शहरिय क्षेत्रमा दूध पनि पोषण तत्वले भरिपूर्ण नपाइन सक्छ । व्यवसायिक रुपमा गाइपालन गर्नेहरुले बढी भन्दा बढी दूध उत्पादनका लागि विभिन्न किसिमका खानेकुरा गाइबस्तुलाई ख्वाउने गर्छन् । दूधमै पनि मिसावट हुने गर्छ । यस्ता दूध भने लामो समय उमाल्नै पर्ने हुनसक्छ । तर, विशुद्ध दूध जो प्राकृतिक रुपमा उत्पादन भएको छ, त्यस्तो दूध लामो समय उमाल्दा त्यसमा रहेको पोषक तत्व नष्ट हुन्छ ।
दूधलाई धेरै समय उमाल्दा के हुन्छ ?
एक अध्ययनका अनुसार बारम्बार दूध उमाल्नाले यसमा रहेका पौष्टिक तत्व नष्ट हुन्छ भन्ने कुरा थोरैलाई मात्र जानकारी छ । कतिपयमा के धारणा पाइन्छ भने, धेरै समय दूध उमाल्दा त्यो स्वादिलो र थप पोषिलो हुन्छ । तर, लामो समय दूध उमाल्दा त्यसमा रहेको पोषक तत्व पनि नष्ट हुन्छ ।
दूध उमाल्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
दूधमा रहेको पोषण तत्व नष्ट हुन नदिन दूधलाई बारम्बार उमाल्नबाट बचाउनु पर्छ । यसबाहेक, दूध उमाल्नै परेको अवस्थामा यसलाई तीन मिनेट भन्दा बढी समय उमाल्नु हुँदैन । र, जब सम्म दूध तताइन्छ, तबसम्म यसलाई चम्चा वा छान्नीको सहायताले चलाईरहनु पर्दछ । दूधलाई सकेसम्म कम उमाल्नु पर्छ । उमाल्नै परेमा पनि धेरै बेर उमाल्नु हुँदैन ।
तपाईले पिउने दुध कतै नक्कली त छैन ? यसरी थाहा पाउनुहोस्
शरीरलाई स्वास्थ्य र तन्दुरुस्त राख्न धेरैले नियमित जसो दूध पिउने गर्छन् । तर, दूध पिउनका लागि सबैले गाई पाल्न अनुकुल हुँदैन, संभव हुँदैन । त्यसैले अरु किसान, व्यापारी वा डेरीबाट दुध ल्याउने गरिन्छ । बजारमा तयारी दुध समेत पाइन्छ ।
हामीले स्वास्थ्य राम्रो बनाउन पिउने दूधले कतै स्वास्थ्यमा हानी पो पुर्‍याइरहेको छ कि ? स्वभाविक रुपमा आशंका गर्ने ठाँउ छ । किनभने पैसा कमाउने दाउमा कतिले शुद्ध दूधको मूल्यमा कमसल दूध विक्री गर्न सक्छन् ।
दूध खरिद गर्नेले वा दूध सेवन गर्नेले त्यसको शुद्धतामाथि खासै प्रश्न नउठाउने भएकाले पनि दूधमा मिसावट हुने संभावना बढी रहन्छ । यदि हामीले त्यस्ता अशुद्ध दूध सेवन गरिरहेका छौ भने त्यो हाम्रो स्वास्थ्यका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । त्यसले स्वास्थ्यलाई उल्टो असर गरिरहेका हुनसक्छ ।
कस्तो दूध राम्रो ?
दूधको गुणस्तर गाई, गाईले सेवन गर्ने खानेकुरा, गाईको जात आदिमा निर्भर गर्छ । खासमा लोकल गाईको दूध बढी स्तरिय मानिन्छ । अझ खुला चरनमा छाडिने गाईको दुध शुद्ध हुनका साथै गुणस्तरिय हुन्छ ।
यद्यपी अहिले गाई गोठमा बाँधेर उन्नत जातका घाँसहरु ख्वाइन्छ, जसले धेरै भन्दा धेरै दुध दिन्छ । त्यस्तै दूध बढाउनकै लागि गाईलाई औषधीहरु दिइन्छ । त्यसैले अहिले बजारमा पाइने दूध हामीले सोचेजस्तो शुद्ध र गुणस्तरिय हुन्छ भन्ने छैन ।
अझ त्यसमा पानी मिसाएपछि दूधको गुण घट्ने नै भयो । दूधको मात्रा बढाउन प्रयोग गरिने विभिन्न अखाद्य तत्व, रसायनहरुले दूधलाई स्वास्थ्यवर्द्धक होइन, विषाक्त बनाउँछ । त्यसैले दूध सेवन गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्छ ।
कसरी मिसावट एवं अशुद्ध हुन्छ ?
१. दूधका पानी मिसाउने संभावना त धेरै हुन्छ । अझ फोहोर वा दुषित पानी मिश्रण गरिएको छ भने त्यसले शरीरमा सोझो असर गर्छ ।
२. कतिले दूधमा युरिया जस्ता हानिकारक केमिकल पनि मिश्रण गर्छन् ।
३. सिन्थेटिक जस्ता रसायन समेत मिश्रण गरेर दूधको मात्रा बढाइन्छ ।
४. डिटर्जेन्ट तथा लुगा धुने साबुन समेत मिसाउने गरिएको छ ।
यसरी बन्छ नक्कली दूध
नक्कली दुध विक्री गर्नेले सिन्थेटिकको प्रयोग गर्न सक्छन् । सिन्थेटिक दुध बनाउनका लागि दुधमा थोरै युरिया हालेर हल्का आँचमा उमालिन्छ । त्यसमा कपडा धुने डिटर्जेन्ट पाउडर, सोडा स्टार्च, वासिङ पाउडर आदि मिलाइन्छ । त्यसलाई दुध जस्तै देखाउनका लागि केहि असली दुध पनि मिसाइन्छ ।
१. दुध अस्वभाविक पहेंलो रंगको छ, स्वाद भिन्नै छ भने त्यसमा शंका गर्नुपर्छ ।
२. दुधको एक थोपा औलामा लिएर रगड्ने, यदि त्यसमा चिप्लो पदार्थ टासिएजस्तो हुन्छ भने त्यो दूध अशुद्ध हो ।
दूधमा सख्खर मिसाएर किन पिउने ? यस्तो छ फाइदा
दुधलाई शुद्ध र पोषणयुक्त पेय मानिन्छ । हामीकहाँ गाईको दुध खाने गरिएको छ । गाईको दूध भिटामिन ए, भिटामिन बी र डि, क्याल्सियम, प्रोटिनको स्रोत हो ।
दूध आफैमा स्वादिलो हुन्छ । कतिले त्यसलाई थप स्वादिलो बनाउन चिनी मिसाउँछन् । मह मिसाउँछन् । सबैभन्दा राम्रो काइदा चाहि के भने, दुधमा सख्खर मिसाउनुपर्छ ।
यसरी सख्खर मिसाइएको दुधमा धिक मात्रामा सुक्रोज, ग्लुकोज, खनिज तरल र पानी हुन्छ । यसका साथै क्याल्सियम, फस्फोरस, फलाम र तामा पनि राम्रो मात्रामा पाइन्छ ।
तातो दूधसँग सख्खर खानु धेरै हिसाबले फाइदाजनक छ । यसले गम्भीर रोगहरु पनि ठिक पार्ने दावी पोषणविदहरुको छ । दूध र सख्खर मिलाएर सेवन गर्दाको लाभ यस्ता छन्
शरीरको वजन बढ्नबाट रोक्ने
तातो दुधमा सख्खर हालेर खाँदा तौल नियन्त्रण हुन्छ । मेाटोपना बढ्नुमा चीनीको ठूलो हात हुन्छ । त्यसैले चीनीको ठाउँमा सख्खर मिलाएर पिउँदा वजन कम हुन्छ ।
छाला बनाउँछ मुलायम
तातो दुध र सख्खरको सेवनले छाला मुलायम हुन्छ र छालाासम्वन्धी समस्याहरु पनि हट्छन् । कपाल पनि बलियो र चमकदार हुन्छ ।
जोर्नीको दुखाई हट्छ
सख्खर खाँदा जोर्नीको दुखाईमा राहत प्राप्त हुन्छ । यसका लागि सख्खरको एउटा सानो टुक्रा काँचो बेसारसँग मिलाएर खानुपर्छ र साथमा तातो दुध पिउनुपर्छ ।
महिनावारीमा महिलालाई राहत
महिलालाई हरेकपटकको महिनावारीमा हुने पीडाबाट छुट्कारा पाउनका लागि तातो दुधसँग सख्खरको सेवन गर्नुपर्छ । यसका लागि महिनावारी सुरु हुनुभन्दा एक हप्ता अगाडिदेखि दैनिक एक चम्चा सख्खरको सेवन गरौं ।
शरीरको थकान अन्त्य
अत्यधिक थकाई महसुष भएको छ भने तातो दुध र सख्खरको सेवन गरौं, तुरुन्तै आराम मिल्नेछ ।
चिसो मौसममा दमका बिरामीहरुले धेरै दुख भोग्नुपर्छ । हावामा अक्सिजनको कमी र बढ्दो प्रदूषणले खोकी र कफ हुने भएकाले सास लिन कठिनाई हुन्छ । यस्तोमा शरीरलाई न्यानो राख्नका लािग तथा कफलाई बाहिर निकाल्न दैनिक दूधमा सख्खर मिलाएर पिउने गरौं । आराम मिल्नेछ । सख्खर र कालो तिलको लड्डु बनाएर दूधसँग खाँदा पनि दममा फाइदा हुन्छ ।
रगत बढाउने, शरीरलाई उर्जा
दूध र सख्खरको सेवन गर्दा रगत सफा हुन्छ । यसलाई पिउँदा शरीरमा रगतको कमि र थकान रहँदैन ।
यदि कसैलाई निद्रा नलाग्ने समस्या छ भने सुत्नुअघि एक गिलास तातो दुधमा सख्खर मिलाएर पिउने गर्नुस । यसबाट चाँडै निद्रा लाग्नुका साथै शरीरमा उर्जा पनि प्राप्त हुन्छ । यसले हाम्रो शरीरलाई रिल्याक्स्ड राख्छ ।
कब्जियतको समस्या भएका व्यक्तिहरुले दुधमा सख्खर मिलाएर खानु रामवाण जस्तै हुन्छ । यसले पाचन प्रक्रियालाई पनि राम्रो बनाउँछ ।
गर्भवती महिलालाई लाभकारी
गर्भवती महिलालाई डेलिभरीपछि हुन थकावट र कमजोरी भगाउनका लागि दुधमा सख्खर मिलाएर पिउने सल्लाह दिइन्छ । यसबाट आमाको दुध पनि बढ्छ र यसले शरीरलाई न्यानो पनि राख्छ ।
क्याल्सियम भरपुर मात्रामा
दुध र सख्खर दुवैमा क्याल्सियम पर्याप्त मात्रामा हुन्छ । यसले हड्डीहरुको रोग जस्तै स्टियोपोरोसिस वा उमेरसँगै हुने जोर्नीको दुखाई आदिबाट सुरक्षित राख्छ । त्यसैले हरेक दिन सख्खरको सानो टुक्रा अदूवासँग मिलाएर खानुस र तातो पानी पिउनुस । सख्खर र दूधमा रहेका कैयन् मिनरल्स आइरन र क्याल्सियमले मांशपेशिहरु र जोर्नीलाई मजबूत बनाउँछ ।
जाडोमा रुघा-खोकी सामान्य कुरा हो । यस्तोमा सख्खर-दूधको सेवन अत्यन्त फाइदाजनक हुन्छ । डाक्टर तथा पोषणविदहरु धेरै गुलियो नखान सुझाव दिन्छन् । तर सख्खरको गुलियोले भने स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा गर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
Don't Miss it रातो मासु खाँदा यति कुरामा ध्यान दिनुहोला
Up Next जीवन उपयाेगी प्रेरणादायीक भनाइहरू
4 weeks ago mygyanbigyan
यस्ता भ्रम जसले तपाइलाइ अगाडी बढ्नबाट राेकिरहेका छन्, जान्रुहाेस्
हामी धेरैजसाे समय भ्रममै बाँचिरहेका हुन्छाैँ । ती भ्रमहरूले हामीलाइ खुलेर बाच्नबाट राेकिरहेका हुन्छन् । हाम्राे गतिमा अवराेध बनेर खडा…
धर्मशास्त्र अनुसार कुन कुन वार दारी र कपाल काट्नु हुदैन ?
प्रकृतिको नियम छ कि कपाल वा नङ निरन्तर बढ्छन् । यी मानव अंगका उत्पादन सुन्दरता बढाउने चिज समेत हुन् ।…
भातको माडको फाइदा थाहा पाउदा पर्नुहुनेछ छक्क
हामी दिनहु भान्सामा खाना पकाउने काम गर्छौ। खाना पकाउने क्रममा हामीले ध्यान गर्दैनौ तर खाना पकाएर फ्याक्नु पर्ने कुराहरु पनि…
यस्ता गल्तीले निम्तिन सक्छ कानको समस्या, महत्त्वपुर्ण जानकारी पढेपछि सेयर गर्नुहाेला
शहरमा बस्नुहुन्छ भने, तपाईं धुलो, धुँवा र चर्को ध्वानीको घेराबन्दीमा हुनुहन्छ । यसको सोझो असर तपाईंको कानमा परिरहेको छ ।…
भेंडे खुर्सानी लगाएतका खानेकुरा पकाएर खादा, यस्तो बेफाइदा
भेंडे खुर्सानी : भिटामिन सिको एकदमै राम्रो स्रोत हो । भेंडे खुर्सानीलाई तीन सय ७५ डिग्रीमाथि पकाउँदा यसमा रहेको सबै…